“Lix kooxood ayaa la tartami karta Bayern Munich” – Jerome Boateng – Gool FM
(Munich) 12 Okt 2020. Daafaca kooxda Bayern Munich ee Jerome Boateng ayaa sheegay inuu doonayo in kooxdiisa ay difaacato dhamaan tartamadii ay ku soo guuleysatay bilihii la soo dhaafay, oo uu ku jiro tartanka Champions League.
Xiddiga reer Germany ayaa intaas ku daray kaddib wareysi uu ku bixiyay majalada “kicker”, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Maxaa diidaya inaan taariikh cusub ka sameyno tartanka Champions League kooxdeena dhalin yarada ah”.
“Ma sahlanaan doonto, laakiin marka laga reebo sanadka 2019, wax badan ayaan ka sameynay tartankan”.
“Ma arko dad badan oo la socon kara awoodeena”.
Intaas kaddib Jerome Boateng ayaa tilmaamay 6-da koox ee la tartami karta Bayern Munich, wuxuuna yiri:
“Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona iyo laga yaabee Juventus”
“Juventus waxaad arki kartaa sida ay wax u maareeyaan, laga yaabee inay qeyb ka noqon karaan arrintaas”.
Si kastaba ha noqotee, Boateng oo qandaraaskiisa Bayern uu dhacayo June 2021, wuxuu doonayaa inuu ciyaaro ilaa iyo inta suurtogalka ah laakiin ma hubo waxa uu sameyn doono dhamaadka xirfadiisa ciyaareed.
“Waxaan heysanaa fursad cusub oo aan ku badeli karno xaallada Barcelona” – Sergio Busquets